Dhamma Video - Browse Media - T - Thi Da Gu
T - Thi Da Gu - သီတဂူ - Most Recent
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ ငြိမ်းချမ...
ထိုင်းနိူင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ဖိကစင်(၁၂၂)ရှိ လင်းလိုင်း အထည်ချူပ်စက်ရုံ။
Tags: ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး နှင့် အတူလက်တွဲရေး တရားတော် - သီတဂူဆရာတော် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ အိုသည့်၊...
ထိုင်းနိူင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ကထုဘဲန်မြို့နယ်၊ ခဲလိုင်ရပ်၊ အောပေါသော ရှေ့(၃)ထပ်တိုက်ဘေးရှိ...
Tags: အိုသည့်၊ နာသည့်၊ သေသည့်တိုင်အောင် ကောင်းမည့်တရား(၄)ပါး - သီတဂူဆရာတော် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ ပရိယေသန(ရ�...
ထိုင်းနိူင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ဘန်ဘောငါးသေတ္တာစက်ရုံ။
[မြန်မာနိူင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ _ ၄-၁-၂ဝ၁၃]
Tags: ပရိယေသန(ရှာမှီခြင်း) တရားတော် - သီတဂူဆရာတော် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ သာသနာ့အော...
သာသနာ့အောင်လံတော်ကိုတီထွင်သူ (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်မှူးကြီးအောလ်ကော့ - အရှင်ဒေ၀ိန္ဒာဘိဝံသ...
Tags: သာသနာ့အောင်လံတော်ကိုတီထွင်သူ (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်မှူးကြီးအောလ်ကော့ အရှင်ဒေ၀ိန္ဒာဘိဝံသ (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) the men who invented buddhism flag ashin devindabhivamsa Thidagu thi da gu world buddhist university Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ လောကဦးခေ...
လောကဦးခေါင်း နှင့် လောကဦးသျှောင် - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ
www.shanyoma.org မှ ကျေးဇူးပြုသည်။
Tags: လောကဦးခေါင်း နှင့် လောကဦးသျှောင် - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူ သဲကုန်း သပိတ်အိုင် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ လုမ္ဗိနီ...
လုမ္ဗိနီ နှင့် သိဒ္ဓတ္ထနာဂရ - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ
Tags: လုမ္ဗိနီ နှင့် သိဒ္ဓတ္ထနာဂရ - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူ ThiDaGu Thi Da Gu sayardaw သဲကုန်း သပိတ်အိုင် thel kone tha bait I sayardaw ashin nyannissara Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ ဂန္ဓာရတိုင...
ဂန္ဓာရတိုင်း (သို့မဟုတ်) ပါကစ္စတန်သို့ ဘုရားဖူးခရီး - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ
Tags: ဂန္ဓာရတိုင်း (သို့မဟုတ်) ပါကစ္စတန်သို့ ဘုရားဖူးခရီး - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူ ThiDaGu Thi Da Gu sayardaw Ashin nyannissara travel to gandhara or parkistan Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ ပြုန်းလုန...
ပြုန်းလုနီးသောရွှေကျွန်းတော ခမ်းလုနီးသောနတ်ရေကန် - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ
Tags: ပြုန်းလုနီးသောရွှေကျွန်းတော ခမ်းလုနီးသောနတ်ရေကန် - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူ သဲကုန်း သပိတ်အိုင် ThiDaGu Thi Da Gu sayardaw dhamma books Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ အပ္ပမာဒ...
အပ္ပမာဒ အနုမောဒနကထာ တရားတော် - သဲကုန်းဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ (သပိတ်အိုင်)
Tags: အပ္ပမာဒ တရားတော် - သဲကုန်းဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ (သပိတ်အိုင်) သီတဂူဆရာတော် ThiTaGu Thi Ta Gu Tha Bait I sayardaw dhamma talk Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ နှစ်ငါးဆယ...
Tags: နှစ်ငါးဆယ်ကြာကအိပ်မက် ယနေ့တစ်ကယ်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိသရ သီတဂူဆရာတော် Dream from 50 years ago really came true Dr.AshinNyanNateThaYa Dr Ashin NyanNateThaYa ThiTaGuSaYaDaw ThiTaGu Thi Ta Gu sayardaw Pages: 12of 2